संविधान संशोधनको लागि दलहरु उल्टो बाटोमा ! प्रस्ताव फेल भए के गर्ने ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
संविधान संशोधनको लागि दलहरु उल्टो बाटोमा ! प्रस्ताव फेल भए के गर्ने ?
Posted by Headline Nepal | १७ बैशाख २०७४, आईतवार ११:२२ |
१७ बैशाख,काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार संविधान संशोधन विधेयक पेश हुँदैछ । संसद बैठकमा विधेयक र त्यसमाथि दर्ता भएका प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
आइतबारको बैठकमा विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सकेर निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी रहेको तर छलफल लम्बिए सरकारले पेश गरेको मुल संशोधन प्रस्तावमाथिको मतदान सोमबार मात्र हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दल र सांसदले व्यक्तिगत रुपमा ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै कुनैपनि हालतमा २ तिहाई पुग्न नदिने रणनीतिमा रहेको एमालेले पनि साना दलका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास पनि जारी राखेको छ ।
दुई तिहाई पुर्‍याउने सत्तापक्ष र पुग्न नदिने विपक्षीको रणनीतिका कारण साना दलका सांसदहरुको मत निर्णायक हुने भएको छ ।
पक्ष/विपक्षमा कति छ मत ?
संशोधन पारित गर्न अहिले संसदमा रहेका ५ सय ९३ सांसदको दुई तिहाई अर्थात ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेसको २ सय ७, माओवादीको ८१, राप्रपाको ३७, राजपाको २४, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र अरु साना दलको १० गरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग ३ सय ९१ सांसद छन् । यसमा २ जना सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनले ७ जना सांसदलाई विधेयकको पक्षमा मनाउनुपर्ने छ ।
यस्तै, विपक्षी गठबन्धनमा एमालेका १ सय ८१, मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी, बहुजन शक्ति र मधेस समता दलका एक, एक सांसद छन् ।
सबै जोड्दा विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ९८ सांसद छन् । यो संख्या संसदमा एक तिहाईभन्दा बढी हो । तर यो गठबन्धनबाट एमाले माले नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दललाई विधेयकको पक्षमा मनाउन सत्तारुढ दलले छलफल चलाइरहेका हुन् ।
सहमतीको लागि ‘सहमतीको सरकार’ आवश्यक छ ?
संविधान संशोधनमा सत्ता पक्ष अहिले कुनैपनि हालतमा दुई तिहाई पुर्याउन कोशिस गरिरहेका छन । यता विपक्षी भने कडा रुपमा संशोधन प्रस्तावलायृ फेल गराउने अडानमा रहेको छ । र उसले कुनैपनि हालतमा देशको पक्षमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नआएको बताइरहेको छ । यो विचमा संशोधनलाई लिउर अहिले मुलुक नै दुई धारमा छ । यसकै कारण स्थानिय निर्वाचन छाँयामा परेको देखिन्छ ।
जनता चुनावमा जान आतुर भइरहेको बेला दलहरु विभाजन तर्फ उन्मुख छन । यसले पक्कैपनि सकारात्मक मोड लिइरहेको छैन । दलहरु सहमतीमा आएर देशलाई निकास दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । पछिल्लो समय दलका नेताहरुमा सर्वदलिय तथा सहमतिय सरकारको पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यो सबैलाइृ दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने फेरी पनि दलहरु विच सहमती बेगर मुलुकले परिवर्तनको आभास पाउदैन । असन्तुष्ट दलहरुलाइ मिलाउन खासगरी मुलुकमा रहेका प्रमुख दलहरु एकठाँउमा आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनको लागि दलहरु उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आभास नेपाली जनताले गर्न थालेका छन । प्रमुख विपक्षी दललाई पछाडी राखेर संविधान संशोधन होला ? कुनै दिन १० प्रतिशत साँसदले हस्ताक्षर नगरेर आज सम्म किचोलिएको नेपालको राजनिति करिव ४० प्रतिशत भन्दाबढीले हस्ताक्षर नगरे के हुन्छ ? त्यो सत्तापक्ष र मधेसवादी दलले बुझ्न जरुरी छ ।
फेरीपनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल भए के गर्ने ? पास वा फेल दुवै स्विकार गर्न मधेसवादी दल तयार छन ? यी यावत कुराहरुमा गम्भिर नभएर सरकारले संविधान संशोधन फास्ट ट्रयाकमा गर्न खोज्नुले दलहरु विचको टकराव अझै चुलिने निश्चित छ
Previousएमालेको घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुँदै : सामाजिक समानता र न्याय सहित आर्थिक सम्बृद्धिमा जोड
Nextचक्का बिना नै विमान आकस्मिक अवतरण
सरकारले आज नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्दै !
६ कार्तिक २०७४, सोमबार ०८:४१
हिमालयन बैंकद्वारा असाहय बालबालिकालाई सहयोग प्रदान
३० फाल्गुन २०७३, सोमबार १८:०२
बङ्गलादेशमा बस दुर्घटना, ११ को मृत्यु
१ फाल्गुन २०७३, आईतवार १३:३८
विप्लव माओवादी हिंसात्मक गतिविधिमा ! सरकारले निगरानी गर्न आदेश दियो
३१ जेष्ठ २०७३, सोमबार ०७:२५